Kasị Unique ihe na-eme Na Amsterdam | Save A Train
Home > Travel Europe > Kasị Unique ihe na-eme Na Amsterdam
Ma ị na-na ịga na Amsterdam nke mbụ ma ọ bụ na-alọghachi inyocha ọmarịcha ọwa mmiri ọzọ, ị ga-achọ ịma banyere kasị pụrụ iche ihe na-eme na Amsterdam! Ọ bụrụ na ị na- njikere-achọ ahụmahụ n'ofè Damrak uzo na Amsterdam, ndepụta a ga-eme ka gị na getaway n'ezie kpokọtara!
Kasị Unique Ihe Iji mee Na Amsterdam: Enwe High Tea kasị nta House Na Amsterdam
Olee ihe pụrụ ịdị na-adọrọ adọrọ ọzọ pụrụ iche karịa inwe ehihie Tea na Amsterdams nta House? Ee, a maa dabara kasị pụrụ iche ihe na-eme na Amsterdam ụgwọ! Nke a obere ụlọ na otu nke Amsterdam ochie agbata bụ naanị 2 mita n'obosara. The nwe n'ezie ume na ndụ ọhụrụ n'ime ochie onwunwe: ulo ozugbo ebe a ezinụlọ ise! Unbelievable dị ka nke ahụ bụ, na bụ nanị otu n'ime akụkọ ndị na-echere gị na nke a mara mma na-ere tii.
The akpa n'ala bụ a mma obere tii ụlọ ahịa, mgbe nke abụọ na nke atọ ala dị njikere ịnabata gị a tii nye fairytale. E nwere ọtụtụ nhọrọ maka nri ụtụtụ, brunch, elu tii, na ọbụna nri ehihie. M na-na kasị nta House ugboro abụọ: otu ugboro maka a ụtọ nri ụtụtụ na nke m bụ onye hour mbubreyo (nke na-abụghị m kasị mma ụbọchị), na ọzọ-adịbeghị nnọọ anya maka ihe n'ehihie, tii na mkpịsị aka sandwiches, atọ dị iche iche achịcha, na scones otú tọrọ ụtọ na mgbe anyị na-eme amara usu nyere iwere ihe pụọ na anyị, anyị egbula oge. N'ehihie Tea anyị họọrọ e kwuru ọnụ ahịa na 25 EUR kwa onye, mgbe High Tea bụ 35 EUR.
Kasị Unique Ihe Iji mee Na Amsterdam: Explore anya Filmmuseum
Of niile nkwafu oge a ụlọ ke Amsterdam, ya bụ anya Filmmuseum na guzo. Na ya sleek, na-egbuke egbuke na-acha ọcha ahịrị ndinyanade mbịne tinyere River IJ na ncherita-iru ọdụ ụgbọ okporo ígwè. The anya bụ na-n'elu nke kasị pụrụ iche ihe na-eme na Amsterdam ndepụta. Ya isi nchegbu bụ sinima, na ọtụtụ meziri àjà a dịgasị iche iche nke òtù nzuzo na kpochapụwo fim. Enwere, Otú ọ dị, nwekwara nwa oge pụrụ iche art ngosi na eme maka ụmụaka, plus Wezuga ezi echiche azụ kwupụta obodo center. Ọzọkwa zoro ezo ebe a, na na na-adịgide adịgide ngosi, bụ a cinematic ụkọ na Devid agụghị ndị gbara na fim nke Jean Desmet, nke na-akpa azụ ka 1907. Were nri ehihie n'ebe a, oke: na Cafe mmanya bụ nke mbụ ọnụego.
Discover The Museum Of akpa na purses
Atọ ala nke ma ochie ma n'oge a handbags, purses na wallets ka Tassenmuseum Hendrikje dị ka otu n'ime Amsterdam kasị ọhụrụ ma na-adọrọ mmasị. Immaculately ya n'ụzọ na-ochie na mma mansion, ẹkenemede gụnyere Art nouveau na Art Deco iberibe, a dum kabinet nke obere na-gbaa acha 1950s handbags mere nke ike plastic a oge ochie ụdị Perspex na (ethically dubious) Devid agụghị ndị gbara handbags mere si anụmanụ. Nwa Oge ngosi nke dịkọrọ ndụ na akpa na purses weta collection.
Ọ bụrụ na otu n'ime ndị kasị pụrụ iche ihe na-eme na Amsterdam agụnye m na-ịzụ ezigbo mma anụmanụ, -agụpụtara m na! Gaa na na gara nnọọ ewu ewu catboat! yep, ị na-agụ na nri! Ọ bụ ezie na nwamba a zere mmiri na niile ụgwọ, na felines ma ọ bụ ndị Poezenboot, iyi n'ụzọ zuru okè n'ụlọ ha na-ese n'elu mmiri nsọ. Ọ na-anụ ebe nsọ ese n'elu mmiri na a kanaal na Amsterdam. Ọ tọrọ ntọala site na Henriette van Weelde na 1966 dị ka a n'ụlọ kpafuo, na-arịa ọrịa, na hapụrụ felines, na ebe ọ bụ na toro n'ime ihe ukara ọrụ ebere.
The ụgbọ mmiri accommodates ruo 50 nwamba ozugbo, 14 nke ndị na-adịgide adịgide bi. Human ọbịa na-nnọọ na arịa dị ka nke ọma. Ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ a cat maka nkuchi, but tourists are also welcome to drop in and scratch a kitty behind the ears.
Dị ka ọ bụ a ọrụ ebere, ụgbọ mmiri ahụ nsọ mụ sere n'elu ekele onyinye ekpe site ọbịa. All ego zụrụ-aga n'ebe na-enyere dị ka ọtụtụ Amsterdam nwamba dị ka o kwere. The Cat Boat Foundation na-akwụ maka neutering nke nwamba bụ ndị ndị nwe ike imeli ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na-elekọta, nakwa dị ka strays. Volunteers-elekọta nwamba, ụfọdụ n'ime ha na-nakweere site ọbịa. The nwamba na-kweere agbazi ndụ n'elu ala nke ọma na n'ebe obibi ọhụrụ ha.
Gaa Plastic Fishing N'oge A Unique Tour Of Amsterdams ọwa mmiri
aga plastic azu na Amsterdam ọwa mmiri bụ otu n'ime ndị kasị pụrụ iche ihe na-eme na Amsterdam n'ezie! Ma ka m gwa gị, ọ bụ kpọmkwem dị ka ọ na-ada. An environmentally friendly igba paired na a touristic ọrụ site Plastic whale, na 2 hour njem ụgbọ mmiri n'ezie na-anapụta na ma fun na ọmarịcha ebe. Ozugbo ị na-abanye n'ụgbọ mmiri, ị ga-esi na gị onwe gị azu net, na anya ị na-aga!
The akụkụ kasị mma bụ ma eleghị anya na mgbe ndị ọzọ ụgbọ mmiri njegharị ụgbọ mmiri gafere dị ka a gaghị agara aga, ị ga-esi na-aga ebe ọ bụla ị hụrụ a mpempe plastic. It turns into a competitive I Spy game where everyone is super invested in finding even the smallest bits of plastic bags. A n'ezie ememe na-adị mgbe onye ntụpọ a karama nso n'akụkụ ọwa mmiri si. Dị ka onyeisi eduzi ụgbọ dabara n'etiti ịdabere ụgbọ mmiri, ị n'akuku gị na ogwe aka na mmeri azụ ndị iberiibe si! A kwadebere iji tụlee weirdest catch nke ụbọchị nakwa dị ka ochi na nkekọ na ndị ọzọ nọ.
M na-eche na ahụmahụ a bụ maa abara gị uru, na-enye ihe pụrụ iche na ụzọ isi nweta Amsterdam ọwa mmiri. Ị ga-akpali ọtụtụ enweghị na-ike gwụrụ, na ozugbo tour bụ n'elu, ị ga-ibiri nke ụgbọ mmiri na a echiche nke ihe nweta dị ka nke ọma. All na n'ihi na dị nnọọ 25 EUR.
The tour Woonbootmuseum
Ọ bụrụ na i chetụla ihe ọ bụ dị ka na-ebi ndụ na otu nke Amsterdams houseboats, nke a bụ gị ohere iji chọpụta. On anyị ndepụta nke kasị pụrụ iche ihe na-eme na Amsterdam, i nwere ike ime nke! The nwe bụ enyi na enyi na meghere ha kpochapụwo ụgbọ mmiri, nke na oru na 1914 dị ka a ugboibu maka ájá na gravel tupu e tọghatara na 1960. Ọbịa nwere ike chitụ ụzọ ha site na mma ndụ ebe, ebe a njuaka nkọwa mbadamba nkume ndị e na-enye ala ala na ụgbọ mmiri ndụ. The nwe bụ bụghị naanị; fọrọ nke nta 3,000 barges na houseboats na-plugged n'ime Amsterdams gas na ọkụ eletrik na netwọk. ọchịchọ ịmata afọ ojuju, you can stroll along the street to an excellent dining establishment, restaurant enyí nnụnụ.
Kasị Unique Ihe Iji mee Na Amsterdam: Were An Audio Tour Site Tuschinski Ụlọ ihe nkiri
Chọpụta ihe ndị mere n'azụ pụtara Tuschinski Ụlọ ihe nkiri. Ugbu a a na-arụ ọrụ sinima, na Ụlọ ihe nkiri na Reguliersbreestraat bụ akụkụ nke Pathe otu. The pụrụ iche facade bụ a mix nke Art Deco na nkà nouveau. Kere on Tuschinskis ọrụ site atụpụta ụkpụrụ ụlọ Hijman Luis de Jong. Ma maa mma dị ka facade bụ, sinima nnukwu ulo bụ ezigbo ihe nkiri na e nwere ihe dị nnọọ ka maa mma dị ka na-ekiri a mmasị nkiri na a red velvet oche.
The nkiri na-enye kwa ụbọchị njegharị ọdịyo na mmalite n'etiti 09:30 na 11:30. The tour bụ dị na ma English na Dutch. ọ dịruru 45 nkeji na-akwụ ụgwọ 10 EUR nke na-agụnye a cup of tii na kọfị. Njem emekwara na adi maka nnukwu otu na-amalite site 15 ndị mmadụ. Iji akwụkwọ, zigara ozi-rondleidingen.tuschinski@pathe.nl.
Ọ bụrụ na ị ga-amasị na-enwe ihe nkiri ambiance, ị pụrụ a lee anya na-zubere nkiri screenings. E ị ga-ọzọ arụmọrụ na Pathe website. Iji na-enwe a na-egosi na mara mma nkiri ohere, Lee maka movies na Great Hall. Mgbe ụfọdụ, e nwere ike ndụ concerts nakwa.
Kasị Unique ihe na-eme Na Amsterdam: Gaa On An Ụzọ Mgbapụ Room Adventure Na Rijksmuseum
N'oge okpomọkụ nke 2018 Rijksmuseum ulo oru ihe pụtara na a ga a ejedebeghị Noua pụrụ iche. Ọ bụ ugbu a a pụrụ iche Mgbapụ game experience na na anyị na ndepụta nke kasị pụrụ iche ihe na-eme na Amsterdam na-ewe ebe Amsterdams kasị ama ngosi nka. Otú ọ dị, o yiri ka mgbe mbụ nke ọma, ọchịchọ bụ ebe a na-anọ. Ahụmahụ dịruru a na-emesapụ aka 1.5 awa na n'ezie akwusila ị n'ime ikuku. Ị na-tasked na-agbake a usoro zuru ohi ihe narị afọ nke 18 n'akwụkwọ site Italian dibịa afa na My Chemical Romance Alessandro Cagliostro.
Ụwa bụ naanị Museum lara ebube nke Fluorescence
Amsterdam ama Anne Frank House bụ nnọọ nso nke a obere ihe ngosi nka ewepụtara nnọọ psychedelic ihe nke a nnukwu ihe mere na ọ bụ otu n'ime ndị kasị pụrụ iche ihe na-eme na Amsterdam!
Ekesịpde na ejikwara site inyinya tailed artist Nick Padalino. Electric Ladyland bụ maa n'elu nke kasị pụrụ iche ihe na-eme na Amsterdam ndepụta. Ọ pụrụ ịchọta n'okpuru N'otu aka ahụ aha ya bụ n'okporo ámá larịị art gallery, electric Lady. Electric Ladyland bụ ụwa mbụ (na ndị o yiri naanị) museum focusing solely on the magic of fluorescent light.
Njikere na-aga na a na njem obere gara, ma oh ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-akpali? Enwetaghị a na-agba ịnyịnya na Save A Train! Ọ dịghị zoro ezo ụgwọ, dị nnọọ ala!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Kasị Unique ihe na-eme Na Amsterdam” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-unique-things-amsterdam/- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / fr na / de ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#amsterdamtrip #UniqueAmsterdam travelamsterdam nje ndi njem
Gịnị Bụ The Best Vintage-echekwa na Europe
Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Ingbọ ologo Spain, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe